Teereezaa Meey waa'ee Sooriyaa murtee gochuuf kaabinee yaamte - BBC News Afaan Oromoo
Teereezaa Meey waa'ee Sooriyaa murtee gochuuf kaabinee yaamte
Ministerri Muummee waa'ee fayyadama meeshaa kemikaalaa Soriyaa keessatti ta'e jedhame ilaalchisee deebii mootummaansanii fudhatturratti mariisisuuf kaabinee yaaman.
Ministiroonnis tarkaanfii waraanaa akka yaada furmaataatti Ameerikaa fi michuuwwan isheen kaa'ame irratti murteessu.
Teereesaan mootummaa Asaad irratti, manni marii utuu irratti walihingaliin tarkaanfii fudhachuuf qophii taatee jirti, jechuun maddeen BBC'tti himaniiru.
Biyoonni michuuwwan kunneen, haleellaan walfakkaataan Duumaa keessatti deebi'ee akka hinrawwanne ittisuu barbaadu.
Meey ''waanti hundumtu kan agarsiisu'' mootummaan Sooriyaa pirezidaant Bashaar al-Asaadiin hoogganamu, itti gaaftamummaa akka qabudha. Tarkaanfii haleellaa keemikaalaa gochuu waakkachaa haa jiraatan malee.
Kaabineen kun yoo hirmaannaa tarkaanfii waraanaa Inglizii kan raggaasisu ta'e, humni waraana Briteenis tarkaanfii Sooriyaarratti fudhatamu keessatti dabalama.
Haa ta'u malee, dubbi himtuun Waayit Haawuus kan taate Saaraa Samdeers, ibsa Roobii kennite irratti, pirezidaant Tiraamp haleellaa misaayilaa michuu isheerratti fudhatamuuf jedhuuf Ruusiyaan 'qophi akka taatu' akeekkachiisuu isaaniis deeggaruun haasofte.
''Pirezidaantichi filannoowwan irratti murteessuu maluu baay'een dhiyaatefi jira,' haa ta'u malee ''tarkaanfi fudhachuu mallu addaan baafne lafa hinkeenye'', jechuun dabalanii gabaastootatti dubbataniiru.
Meey garuu hanga carraa Meseensoota Mana marii mari'achiftutti pirezidaant Tiraamp tarkaanfii fudhachuuf jedhan akka tursan gaafachuu hinfeene yaada jedhu BBC'n madda dhiheenya qaburraa hubateera.
Miseensoonni mana marii boqqonnaa Faasikaarraa deebi'anii Wiixata hojii eegalu.